मैले पेप्टाइड अलार्लेन किन्नु भन्दा पहिले के थाहा पाउनु पर्छ?
पेप्टाइड Alarelin किन्नु अघि मलाई के थाहा छ?
1। अलारेलिन के हो?
2। कार्यको तंत्र
3। अलार्लिनको आवेदन
4। सन्दर्भको लागि अलार्लिन प्रयोग
5। Alarelin फायदेहरू
6। अलार्मेल साइड इफेक्ट्स
7। अलार्लिन भण्डारण अवस्था
1. अलारेलिन के हो?
Gonadotrophin-releasing hormone (alarelin) एक सिंथेटिक एलआर-आरएच एपोनस्टको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ, जुन उत्पादन उत्तेजित गर्दछ र तपाईंको पिट्यूट ग्रंथहरु बाट LH र FSH को रिलीज गर्दछ। औषधि यसको ओविलेशनको साथ साथै endometriosis को उपचार को लागि लोकप्रिय छ। औषधिले गुणस्तरको परिणामहरू वितरण गरिसकेको छ किनभने यो पत्ता लगाइयो यो ठूलो सहयोग हुन सक्छ जसमा विरोधी विरोधी पूरकको रूपमा। अलारेलिन दुवै अनलाइन र भौतिक भण्डारहरूमा उपलब्ध छ। यद्यपि, सँधै सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले एरेलिनबाट एक किन्नुहोस् किन्नुहोस् विश्वसनीय अलारेलिन निर्माता। अलारेलिन बिक्रीको लागि गुणस्तर र मूल्य निर्धारणको सन्दर्भमा एक निर्माताबाट अर्कोमा भिन्न हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै छन् अलार्मेल आपूर्तिकर्ताहरू बजारमा तर सर्वोत्तम हेर्नको लागि तपाईंको समय लिनुहोस्। गुणस्तर औषधीले अधिकतम अलार्लिन परिणामको गारंटी दिन्छ।
प्राकृतिक Alarelin (79561-22-1) रूपहरू पशुहरूमा उपस्थित छन् र महिलाहरु मा ovulation प्रेरित गर्न प्रयोग गरिन्छ। अलारेलिन सिंथेटिक संस्करणहरु लाई एलएच आरएच एंटीगोनस्ट सेट द्वारा प्राकृतिक LH-RH भन्दा अधिक खुराक मा सेट गरेर निर्मित गरिन्छ जो विट्रो या प्रेरित ovulation मा gonadotropins स्राव मा पाया जान सक्छ। अलारेलिन कार्य तपाईंको पिट्यूटरी ग्राउण्डलाई थप FSH-LH उत्पादन गर्न ट्रिगर गर्न हो।
2. कार्यको तंत्र
माथि उल्लेखित रूपमा, अलारेलिन, एक पटक यो तपाइँको शरीरको प्रणालीमा पुग्दा, यसले पिट्युटरी ग्राउण्डहरू लाई बढी लाइटिनलाइज हार्मोन (एलएच) र अनुयायी-उत्तेजना हार्मोन उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्छ। दुई हार्मोन महिलाको सम्पूर्ण उत्पादक चक्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। FSH को वृद्धि, प्रजनन प्रक्रियाहरु, र pubertal परिपक्वता को नियंत्रित गर्दछ। अर्कोतर्फ, महिलाहरूमा, एलएच हार्मोनले कार्पस ल्युटमको विकास र ओवन प्रोसेसरको विकासलाई पनि उत्प्रेरित गर्छ। पुरुषको लागि, अलार्लिनले टेस्टोस्टेरोन हार्मोनको उत्पादन उत्तेजित गरेर काम गर्दछ। एक सफल शरीर प्रजनन प्रक्रिया को लागि, तपाईंको शरीर पर्याप्त LH र FSH उत्पादन गर्न को स्थिति मा हुनु पर्छ। पेप्टाइड अलार्लिन दुई महत्वपूर्ण हार्मोनको उत्पादन बढाउनमा ठूलो सहयोग हुन सक्छ। तथापि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ डाक्टरको प्रिस्क्रिप्ट अन्तर्गत लागूपदार्थलाई उन्नत दुष्प्रभावको सामना गर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ। Alarelin राम्रो काम गर्दछ जब तपाईं राम्रो काम गर्दछ र तपाईंको डाक्टरको Alarelin प्रयोग निर्देशनहरू पनि छ। तपाइँले थप स्पष्टीकरण आवश्यक पर्दछ यदि तपाईले अल्टरेलिन आपूर्तिकर्तालाई थप औषधिको बारेमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ।
अलार्मेलिन प्रायः मेडिकल रिसर्चको लागि प्रयोग गरिन्छ जानवरको शरीरमा औषधीको प्रभाव बुझ्नका लागि अधिक प्रजनन अध्ययनसँग सम्बन्धित अवस्थाहरूका लागि। त्यसोभए, अहिलेसम्म, औषधीले प्रजननको प्रक्रिया सुधार गर्न मानव निकायहरू, विशेष गरी महिलाहरूलाई मद्दत पुर्याउन उत्तम पूरकहरू बीचमा पत्ता लगाएको छ। पुरुषहरू पनि टेस्टोस्टेरोन हार्मोनको उत्पादन बढाउन औषधि प्रयोग गर्न सक्छन्। Alarelin आवेदन तपाईंको डाक्टरको पर्चामा निर्भर गर्दछ। ड्रग पाउडर र इंजेक्शन फारममा उपलब्ध छ। तपाईंको चिकित्सकले मेडेलिन अनुप्रयोगमा तपाईंको चिकित्सा अवस्थाको लागी एकेडेमी परीक्षा पछि लागी तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न उत्तम व्यक्ति हुनेछ। कच्चा अलारेलिन पाउडर दबाइ पनि एडोडोटेरियोसिस या हाइस्टोरोमीमामा उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
इंजेक्शन को लागि, तपाईंलाई नियमित अलार्मेलिन खुराक को अनुसूचित गर्न र तपाईंको दबाइ देखि इंजेक्शन प्राप्त गर्न हुनेछ। तपाईं घरबाट आफैलाई इंजेक्शन गर्न सक्नुहुन्छ तर सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको डाक्टरले तपाईंलाई डोजी गर्न सुरू गर्नु अघि तपाईंलाई प्रशिक्षित गर्दछ। याद राख्नुहोस्, विचलित अलार्लिन प्रयोग तपाईंको स्वास्थ्यलाई पनि हानिकारक हुन सक्छ वा अन्य स्वास्थ्य जटिलताहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ। काउन्टरमा बिक्रीको लागि खरिद अलारालिन पनि खतरनाक हुन सक्छ यदि तपाई एक कम्पनीबाट प्राप्त हुनुभयो भने तपाईलाई भरोसा गर्न सक्नुहुन्न। एक सम्मानित अलार्लिन निर्माताले तपाईंलाई औषधको उपयोग गाइड प्रदान गर्नुपर्दछ। तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई राम्रो पेप्टाइड अलार्रेलिन खरिद गर्न मद्दत पुर्याउनु पर्छ वा तपाइँ सजिलै संग यो हाम्रो वेबसाइट बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
4.सन्दर्भको लागि अलार्लिन प्रयोग
अलारेलिनलाई निम्न तरिकामा प्रयोग गर्नु पर्छ;
सुन्तला र पेप्टाइड भिडीयो को शख्स को शीर्ष मा एक शराब धुंध ले लो
अब एउटा 1cc सिरिंज छ र तपाईंको मनपर्ने पतला लिनुहोस्। तपाईंको डाक्टर द्वारा सल्लाह अनुसार सही माप छान्नुहोस् र निर्धारित भन्दा कम वा बढीको लागि जानुहोस्; यो या तो दुष्प्रभाव को नेतृत्व गर्न वा वांछित प्राप्त गर्न मा विफल हुन सक्छ अलार्लिन परिणामहरूमाईनक्सक्स एल 1mg प्रति 10mg प्रति (XCUMX एमएल) (सीसीएनएक्सएक्सएमएल (सीसी) भनेको हो कि तपाईंको अलार्लिनिन खुल्ला U100 स्लिम सिरिन्जमा लगभग दस अंक हुनुपर्छ जो मेलनोटन को 1mg को बराबर छ। अर्कोतर्फ,2मिलीलीटर 9cc) प्रति 10mg मा melanotan को मतलब U100 सिरिंज मा प्रत्येक दस अंक 1mg melanotan जस्तै छ।
सबै माथिका चरणहरू पछि, अब तपाईंको सुई लिनुहोस् जसले सुन्तल समावेश गर्दछ र यसलाई तपाइँको छायाबाट लिने पाउडरमा धक्का दिनेछ र हल्का तपाइँको पेप्टाइड भंग गर्न दिनुहोस्।
एक पटक भित्ता बोतलमा थपिएको बेला, अहिले सुस्त समाधान समाधान गर्दछ तर यसलाई बलियो बनाउँदैन जब सम्म सबै लाइफफिलाइज्ड पाउडर भंग गर्न र तपाईं एकदम स्पष्ट रहनु भएको छ।
समाधान। अब तपाईंको अलार्लिन प्रयोगको लागि तयार छ
Alarelin एक अनुभवी र विश्वसनीय बिक्रेताबाट तपाईका लागि अधिकतम अलार्लिन परिणामहरूको आनन्द लिनको लागि। सबै भन्दा राम्रो अलारेलिन बिक्रीका लागी निम्न लाभहरू प्रस्ताव गर्नुपर्छ;
पुरुषहरूमा टेस्टोस्टेरोन स्तर सुधार गर्छ
लागू औषधि प्रयोग गर्न सजिलो छ, र यसले महिलाहरु मा एडोडेट्रियस को उपचार गर्दछ। अझ राम्रो परिणामको लागि तपाईले मिश्रण र अलार्लिन डेजेजिन निर्देशनहरू सुनिश्चित गर्नुहोला।
तपाईंको पिट्यूटरी ग्रंथिलाई अधिक LH र FSH उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्दछ।
जब सही तरिकाले प्रयोग गरिन्छ गुणस्तर र लामो अवधिको परिणाम प्रदान गर्दछ।
दबाइ हाम्रो वेबसाइटमा सजिलै उपलब्ध छ, र हामी पनि छिटो वितरण गर्दछौं।
अन्य पेप्टाइड्स जस्तै, अलार्लिनले वृद्ध लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
महिलाहरु मा सर्वश्रेष्ठ समाधान प्रजनन चुनौतियां।
6.अलार्मेल साइड इफेक्ट्स
ज्ञात अलार्लिन फाइदाका अलावा, यस औषधिमा पनि अँध्यारो पक्ष छ त्यसैले यति धेरै समय हुन्छ जब। तथापि, मानव निकायहरूले विभिन्न उत्पादनहरूमा फरक प्रतिक्रिया देखाए। केही व्यक्तिहरूले कम साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्छन् र अरूलाई सही Alarelin आवेदन पछ्याउँदा एक भयानक अनुभव हुन सक्छ। यही पेप्टाइड अलार्लेन प्रयोगकर्ताहरूमा लागू हुन्छ र उत्पादनको समीक्षा हेर्दै, तपाईंलाई थाहा पाउनेछ कि अधिकांश औषध प्रयोगकर्ताहरू दबाइसँग खुसी हुन्छन्, तर प्रयोगकर्ताहरूको एक खण्डले एउटै पूरकसँग खराब अनुभव गरेको छ। केही अल्पेलिन साइड इफेक्टहरू समावेश छन्;
औषधि ओभरडाइज गर्दा पानीको प्रतिबन्ध बढ्यो
इंजेक्शन क्षेत्रहरू वरिपरि दुखाइ वा खुसीपन
वजन घटाने / लाभ हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, त्यहाँ अन्य अर्कैरिन साइड इफेक्टहरू छन् जुन तपाइँका खुराकहरू लिँदा अनुभव गर्न सक्दछन्, र उनीहरूले पनि तपाइँको शरीरले औषधीसँग कस्तो प्रतिक्रिया देखाएमा निर्भर गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरू जसले अग्रगामी Alarelin साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्दछन्, तर यो सधैं मामला होइन। यदि तपाईले कुनैपनि अद्वितीय भावना वा चिन्हहरू देख्नुहुन्छ भने स्थिति खराब हुन अघि तुरुन्तै तपाईंको डाक्टरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। केही गम्भीर दुष्प्रभावहरू समावेश छन्;
प्रभावहरू उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूमा सीमित छैनन् किनभने विभिन्न व्यक्तिहरूले अनुभवहरू फरक पारेका छन् तर तपाईलाई Alarelin खुट्टा लिँदा नियमित रूपमा नियमित परीक्षाका लागि जान्छन्।
7. अलार्लिन भण्डारण अवस्था
अलार्लिनलाई सप्लायरबाट औषधि प्राप्त गरे पछि भण्डारणको बाँकी भाग तपाईका सबै जिम्मेवारी हो। Alarelin निर्माता दबाइ भण्डारण कसरी गर्ने भनेर तपाईंलाई सम्झाउनेछ। उचित भण्डारणले तपाईंलाई अलार्मेलिन अधिकतम लाभको ग्यारेन्टी दिन्छ। सामान्यतया, यस औषधि कोठाको तापमानमा स्थिर छ, तर यदि तपाइँ यसलाई लगभग तीन हप्ताको लागि प्रयोग गरिरहनु हुन्छ भने तपाईले लगभग -18 डिग्री सेल्सियसको साथमा एरेलेल भण्डार गर्नुपर्छ। उपयोगको 2-7 दिनहरूको लागि,4डिग्री सेल्सियस सबैभन्दा उत्कृष्ट भण्डारण अवस्था हुनेछ। यदि तपाईं लामो समयको लागि लागू औषधि प्रयोग गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ भने, यो सिफारिस गरिएको छ कि तपाइँ क्यारियर प्रोटीनहरू जस्तै 0.1% BSA वा हो जस्तै थप्नुहोस्। यस औषधि भण्डारण गर्दा फ्रिज-थोपा चक्रहरू रोक्न सम्झनुहोस्।
वी, एस, गोंग, Z., दांग, जे, जिए, के।, वी, एम।, जान, जे, र वांग, जे (2012)। जीएनआरएचआर, एफएचआरआर र एलएचआर को पिट्यूटरी र जीएनआरएचएचआर को वितरण मा अलारेलिन सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रभावहरु। कृषि विज्ञान को Jiangsu जर्नल, 28(1), 114-120।
झांग, एस, हान, जे, लेंग, जी, डि, एक्स।, शा, सी।, जिंग, एक्स।, ... र लियू, डब्लु। (एक्सएनएक्सएक्स)। फार्माकोकोनिकिन र फार्माकोडाइमिक अध्ययनको लागि गोस्सेलिन र रोस्ट प्लाज्मामा टेस्टोस्टेरोनको साथसाथै दृढताका लागि एक LC-MS / MS विधि। Chromatography B को जर्नल, 965, 183-189।
अरुरुतो, टी।, नासिरी-नासाजीजी, ए, अदीदी-मोगादम, बी, रेजवी, के.ए. र पनाही, एफ। (एक्सएनएनएक्सएक्स)। FSH पछि, eCG-FSH र एचएमजी र एचएमजी र गर्भावस्था दर विभिन्न व्यास संग ब्लास्टोस्स्ट्रिक भ्रूण को हस्तांतरण पछि र dromedary ऊल्ल मा आकार पछि सुपरवोल्टेज प्रतिक्रिया। थियोगोजेनोलोजी, 106, 149-156।